Ciidamada Booliska Cadaado oo shaqo joojin ku dhawaaqay | Baydhabo Online
Ciidamada Booliska Cadaado oo shaqo joojin ku dhawaaqay
Saraakiisha ciidamada Booliska Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug, ayaa ku dhawaaqay inay sameeyeen shaqo joojin, kadib markii sida ay sheegeen in muddo ah aysan helin mushaaraadkii ay xaqa u lahaayeen ciidamada.
Taliye ku xigeenka Ciidanka Booliska Magaalada Cadaado Dhame Cumar Macalin Cali, ayaa u sheegay Warbaahinta in ciidamada ay joojiyeen dhamaan shaqooyinkii ay ka hayeen Saldhiga Degmada Cadaado, ayna kala tageen ciidanka.
Waxa uu sheegay ciidamada in muddo ah inay cel celinayeen inaysan shaqada ka tagin, balse hada arinta ay noqotay in la celin waayo ciidamada, maadaama xaasaskooda iyo iyaga ay isku dhaceen, kadib markii ciidanka mushaaraadkii aysan helin muddo bilooyin ah.
Saldhiga Degmada Cadaado ayuu sheegay Taliye ku xigeenka inay ku xiran yihiin 11 Maxbuus oo dambiyo culus ku eedeysan, kuwaasi oo uu sheegay inaysan helin xitaa raashinkii ay cuni lahaayeen.
“Dhamaan Saldhiga waa xiran yahay 11 qof oo dambiyo culus gashay ayaa ku xiran oo dil iyo dhac iyo kufsi geysatay ah, xitaa maxaabiista xuquuq lama siiyo iyo ciidanka, ciidamada muddo ayaan celinaynay oo aan laheyn shaqeeya, laakiin si rasmi ah ayeey hada u gadoodeen.” Ayuu yiri Taliye ku xigeenka.
Maamulka Galmudug oo hada aanan laheyn hogaan rasmi ah, maadaama Madaxweynihii maamulkaasi oo meel xun dhigay Galmudug uu iska casilay xilka, ayaa hada loo qorsheynaya in Bishan gudaheeda ay dhacdo dooarasho Madaxweyne.
Ciidamada Galmudug ayaa ku shaqeeya duruufo kala duwan oo ku aadan dhanka mushaaraadka iyo agabka ciidamada ay ku shaqeeyaan oo ah kuwa aanan ku filnayn.